Ahoana ny fanovana ny IP ho an'ny daholobe: Ny fomba tsara indrindra | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fanovana ny IP ho an'ny daholobe
Eder Esteban | | General, Tutorials
Azo inoana fa nanontany tena ianao indraindray hoe inona izany IP IP izany, miampy ny fomba hanovantsika azy. Satria io karazana IP io dia manana fahaizana azo ovaina, izay misy fomba maro azo atao ankehitriny. Hilaza aminao bebe kokoa momba izany izahay eto ambany, mba hahafantaranao ny fomba azo atao.
Public IP dia hevitra efa henonao tokoa, saingy mety tsy dia mazava loatra ny fahasamihafany amin'ny adiresy IP amin'ny ankapobeny. Ny valin'izany rehetra izany dia avelanay anao eto ambany, mba hahafantaranao izany, ho fanampin'ny fomba azo ovaina.
1 Inona no atao hoe Public IP
2 Ahoana ny fanovana azy
2.1 Vonoy ary alefa ny router
2.2 Mampiasà VPN
2.3 taratasy fanomezam-pahefana
Inona no atao hoe Public IP
Ny IP Public dia adiresy IP, izay amin'ity tranga ity dia ilay mpamatsy Internet anao (ny mpandraharaha amin'ny ankapobeny) no manendry anao. Azontsika jerena izany toy ny takelaka na ID. Amin'izany fomba izany, rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra isika dia afaka jerena ity adiresy ity ary fantatra fa isika no mifandray amin'ny tambajotra, satria samy manana ny adiresiny ny mpampiasa tsirairay amin'ity tranga ity. Toy izao no fiasany.
Mba hahafahana miserasera amin'ny Internet dia ilaina ny fananana IP IP. Zavatra tsy maintsy atao sy ilaina io, satria raha tsy manana izany isika dia tsy azo atao ny mifandray amin'ny tambajotra. Amin'ny ankapobeny dia afaka mahita karazana maro ao anatin'ity sehatra ity isika. Misy ny sasany raikitra, izany hoe, tsy miova mihitsy izy ireo, na dia mavitrika aza ny ankamaroan'izy ireo, ka isaky ny miova matetika.
Satria adiresy omen'ny mpikarakara antsika izany, ny zavatra mahazatra indrindra dia ny mavitrika. Tsy dia fahita ireo raikitra, ho fanampin'izany, amin'ny tranga maro dia voaloa izy ireo, noho izany dia mila mangataka mazava azy ao amin'ny mpandraharaha isika. Na dia tsy dia ampiasaina firy aza io karazana io dia mihamaro hatrany ireo mpandraharaha mijanona amin'ny fanomezana IP aza amin'ity karazana ity.
Ahoana ny fanovana azy
Satria mety manana adiresy mavitrika ianao amin'ity tranga ity, heverina fa azo ovaina. Ny tena mahazatra dia ny mpandraharaha anao manokana no miandraikitra ny fanovana azy indraindray, ny fahamaroan'io dia miovaova. Na dia mety hisy aza ny fotoana irian'ny mpampiasa azy hanova azy tsy miankina amin'ny mpandraharaha. Mba hahatratrarana izany dia misy fomba sasany mety hanampy amin'ny fanatanterahana azy.
Vonoy ary alefa ny router
Hetsika tena tsotra io, saingy mety hiasa tsara raha te hanova IP ho an'ny daholobe isika. Amin'ity tranga ity, ny sisa ataontsika dia ny famonoana ny router, ary avelao toy izao mandritra ny segondra vitsy. Avelao ho tapaka mandritra ny folo segondra eo ho eo izy avy eo dia averintsika indray.
Azo inoana, rehefa nahavita an'io isika, rehefa mifandray amin'ny Internet, efa manana adiresy IP ho an'ny daholobe izay tsy mitovy isika. Ka tao anatin'ny segondra vitsy monja dia nahatanteraka izay notadiavintsika tamina tranga misy anay izahay. Io no fomba tsotra indrindra hitantsika ankehitriny.
Ny VPN dia mamela antsika hifandray amin'ny Internet amin'ny fomba azo antoka sy tsy miankina, mandingana ny karazana sakana rehetra. Ny iray amin'ireo lakilen'ity karazana fifandraisana ity dia Hanova ny adiresy IP ampiasainay izahay, ny IP ho an'ny daholobe amin'ity raharaha ity. Ka aseho azy ho fomba iray hafa azontsika ampiasaina raha te hanova izany adiresy izany amin'ny solosaina isika. Tsy mila mampiasa VPN fotsiny isika. Tsy manova IP marina izahay amin'ity tranga ity, fa amin'ny alàlan'ity fampiasana ity mpanelanelana ity dia fantatra amin'ny iray hafa isika.
Ny fisafidianana VPN dia malalaka be amin'izao andro izao. Na ny mpitety tranonkala aza toa Opera dia manana VPN namboarina manokana, izay hanampy antsika amin'izany. Ka asa ny mitady safidy mifanaraka amin'izay tadiavinao, izay hanome anao ireo fiasa tiana hahafahanao mivezivezy amin'ny fomba tsara indrindra, ankoatry ny fanovana ny adiresy Public IP voalaza, izay no irina amin'ity indray mitoraka ity ... Lafiny iray tokony hodinihina ny hoe maimaim-poana ve ity VPN ity, satria tsy ny rehetra eny an-tsena no.
Safidy hafa mitovy amin'ny an'ny VPN, izay hanome anao ny mety hanovana ny adiresy IP ho an'ny daholobe anananao rehefa mifandray amin'ny Internet. Ny fiasan'ity karazana serivisy ity dia hanome antsika ihany koa ny mety hisian'ny adiresy hafa hiseho noho ilay ampiasaintsika rehefa mampifandray amin'ny Internet. Ka azontsika atao amin'ny fomba izay ho antsika dia azo antoka sy malina kokoa. Afaka mitady proxy mifanaraka amin'ny zavatra tadiavintsika àry isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Ahoana ny fanovana ny IP ho an'ny daholobe
Azo alaina izao ny Photoshop ho an'ny iPad Inona no atolotray antsika amin'ity kinova ity?
Arbily G9 famerenana an-tsarimihetsika